ShweMinThar: February 2019
၁။ Gym ဘယ်အချိန်လုပ်ရမလဲ ?
မနက်ရယ်၊ ညရယ် ဘယ်အချိန်ရယ်လို့ သိပ်မရှိပါဘူး။ လုပ်နေချိန်မှာ အားရှိနေဖို့၊ လန်းဆန်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အားရှိဖို့ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ အားရှိပေမယ့် ထိုင်းမှိုင်းနေရင်တောင် Gym ထဲရောက်ရင် လန်းသွားတတ်တာပဲ မဟုတ်လား။ အားရှိဖို့ဆိုရင်တော့ Gym မဆော့ခင် ၂နာရီအလိုလောက်မှာ အစာတစ်ခုခုစားထားဖို့ လိုပါတယ်။ စားတဲ့ အစာဟာဆီတွေများတဲ့ ဟင်း၊ ဆီကြော်စာတွေ မဟုတ်ပဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ ချက်ထားတဲ့ အစာကို တတ်နိုင်သလောက်ရွေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့
-ပေါင်မုန့်ညို Peanut butter သုတ်
စတာတွေ စားထားရင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့အခါ အားရှိပြီး ပိုလုပ်နိုင်တာမို့ အစာတစ်ခုခု စားထားဖို့ မမေ့ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
၂။ တစ်ခါလုပ်ရင် ဘယ်လောက်ကြာသင့်သလဲ ?
တစ်ခါလုပ်ရင် ဘယ်နေ့မဆို၊ ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမဆို မိနစ်၄၀နဲ့ တစ်နာရီကြားလောက်ပဲ ကြာသင့်ပါတယ်။ တစ်နာရီထက်ကျော်သွားမှာကို Trainer တော်တော်များများက အားမပေးသလို သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကလဲ လိုက်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ လုပ်စရာရှိတာကို အားအပြည့်နဲ့ မြန်မြန်လုပ်၊ Gym ထဲက မြန်မြန် ပြန်ထွက်ဖို့ပါပဲ။ Selfie ဆွဲဖို့မှ မဟုတ်တာပဲ 😂😂😂
(ဘယ်နကြိမ်မရမလဲ၊ ဘယ်လောက်လေးလေးမရမလဲ စသဖြင့် သိချင်ရင်တော့ ဆောင်းပါးရေးပြီးသားရှိပါတယ်။ ဝင်ဖတ်ပါ)
၃။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား ဘယ်လောက်နားရမလဲ ?
စက္ကန့် ၄၀နဲ့ ၉၀ကြားပါ။ မခဲ့တဲ့ အလေးဟာ အရမ်းလေးခဲ့ရင် တစ်မိနစ်ခွဲခန့် နားပြီး သွေးပူအခေါက်တွေဆိုရင်တော့ စက္ကန့် ၄၀လောက်နားရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ကြာကြာနားရင်တော့ နှခုံးခုန်နှုန်း ပြန်နှေးသွားတာမို့ သိပ်မကောင်းပါဘူး။
၄။ Gym ဆော့ရုံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လှမလား?
ဟင့်အင်း လို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။ Gym ဆော့တာ တစ်နေ့ တစ်နာရီဆိုရင် Gym မဆော့တဲ့ အချိန်ဟာ ၂၃နာရီပေါ့။ ကျန်တဲ့ ၂၃နာရီမှာ စားတဲ့အစာ၊ အိပ်တဲ့ အိပ်စက်ချိန်တွေ ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာ ရေးပြီးသားတွေ ရှိပါတယ်။ (တစ်နှစ်စာလေ့ကျင့်ခန်း အပိုင်း ၁၊ ၂၊ ၃ ကို ပြန်ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်)။ အိပ်စက်ချိန်ကတော့ တစ်နေ့ ၇နာရီ အနည်းဆုံးရှိသင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့မိနစ် လေးဆယ်နဲ့ တစ်နာရီကြား Gym ဆော့၊ ကောင်းကောင်းစား ကောင်းကောင်း အိပ်ဖို့လိုတယ်လို့ အတိုပြောရမှာပါ။
၅။ ပိန်ရင် လှရောလား ?
လှသင့်သလောက် လှလာပါလိမ့်မယ်။ အဝတ်အစား ဝတ်ထားရင်တော့ ပိန်ရုံနဲ့ လှတာပေါ့။ အဝတ်အစား ချွတ်တဲ့အခါ၊ ဘီကနီ ဖြစ်ဖြစ် ဝတ်တဲ့အခါ အချိုးအဆစ် ကျကျကြီးနဲ့တော့ မလှနိုင်သေးပါဘူး။ ကျန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပိန်သွားပေမယ့် ဗိုက်ကလေး နည်းနည်းလေး ပူနေသေးတာရှိတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်ပူတယ် ထင်ရတာက ဗိုက်အဆီကနောက်ဆုံးမှ ကျတဲ့ အဆီမလို့ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေက သေးနေလို့ ဗိုက်ပူတာက ပိုပေါ်လွင်နေတယ်လို့ ထင်ရတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်ရအောင် သင့်ဘာသာ ကြည့်ပါ။ ရင်ဘတ်က သေးနေသလား၊ လက်တွေက သေးလွန်းသလား စသဖြင့် သုံးသပ်ပါ။ သေးနေရင် သက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ အဆီပဲ ချနေရင်တော့ လက်ကလေးတွေ ပိန်၊ ပေါင်လေးတွေပိန်ပေမယ့် ဗိုက်ကလေး ပူကျန်နေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆီကျရင် အဝတ်လေးနဲ့ဆို လှပေမယ့် အဝတ်မပါပဲ လှချင်ရင်တော့ အလေးမ သင့်သလောက် မရပါမယ်။ မဟုတ်ရင် Skinny Fat အဖြစ် ဖြစ်ကျန်တတ်ပါတယ်။
၆။ နေရာကွက် အဆီချလို့ရသလား?
လက်ကလေးပဲ တုတ်လို့၊ ခြေသလုံး လေးပဲ တုတ်လို့၊ ပေါင်လေးပဲ တုတ်လို့ နေရာကွက် အဆီချချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြောရရင် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ နေရာကွက် အဆီချလို့ မရဘူးဆိုတာ သုတေသနတွေအရ ခိုင်မာတဲ့ အချက်ပါ။ နေရာလေးကွက်လို့ အဆီချလို့ ရပါတယ်ပြောရင် မမှန်ဘူးလို့ မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေ အတွက် အဆီချလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါ၊ တစ်ကိုယ်လုံး အဆီကျသွားတဲ့ အခါ ခြေတွေ၊ လက်တွေပါ ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ အဆီကျပြီး ပိန်နေတဲ့အခါမှာ တောင် ခြေသလုံးကြီးနေသေးရင် ခြေသလုံးနဲ့လိုက်အောင် ပေါင် တင်ပါး စသဖြင့် ကြီးအောင်ဆော့ပါ။ လက်မောင်းကြီးနေရင် လက်မောင်းနဲ့ လိုက်အောင် ရင်ဘတ် စသဖြင့် ကြီးအောင်ဆော့ပါ။
၇။ Gym နားတဲ့ ရုံးပိတ်ရက်မှာ စားတာများသွားတယ်၊ ဒါဆို ဝလာမှာလား ???
ဟင့်အင်း၊ ဒီလိုစားလိုက်လို့လဲ ဝမလာသလို အစာလျှော့ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ပတ်လောက် လုပ်လိုက်လို့လဲ ပိန်မသွားပါဘူး။ ဈေးထဲမှာ ထည့်ချိန်တဲ့ အသားတွေ ရေထိုးလိုက်လို့ ပိုလေးသွားမယ်၊ အစာပလာ ထုတ်လိုက်လို့ အလေးချိန်ပေါ့သွားမယ် စသဖြင့်လောက် မလွယ်ကူ မရိုးရှင်းပါဘူး။
အပြည့်အစုံမဟုတ်ပေမယ့် ယေဘုယျ ကျကျပြောရရင် အစာတစ်ရက် နှစ်ရက်လောက် ကောင်းကောင်းစားလိုက်ရုံနဲ့ ဘယ်မှာများ ချက်ချင်းကြီး ကြွက်သားတွေထွက်လာ၊ လှလာလို့လဲ။
ဘီယာလေးတစ်ခွက်သောက်လို့ ဘီယာဗိုက်ချက်ချင်း ဖြစ်မလာသလို၊ ကိတ်မုန့်လေး တစ်လုံးစားလိုက်လို့ ဝတုတ်လေးလဲ ဖြစ်မလာပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု ဒီလို ဝလာဖို့ဟာ စွမ်းအင်အပိုတွေ များလာ၊ ပိုလျှံလာရင် အဆီပို အိတ် fat cells ကလေးတွေဖြစ်လာ ၊ ဒီလိုမျိုး စွမ်းအင်အပိုတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှများလာရင် Fat cells အသစ်တွေ ထပ်ထပ်ဖန်တီးလာ၊ စသဖြင့် အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ရတယ် မဟုတ်လား။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ရုံးပိတ်ရက် ဘီယာတစ်ခွက်၊ Pizza တစ်ချပ်လောက်နဲ့ ချက်ချင်းဝလာစရာမရှိပါဘူး။ နှစ်ပတ်ကို တစ်ရက်တစ်လေလောက်ပျက်စီး (အစားသောင်းကျန်)တာကနေ တစ်ပတ် တစ်ခါ၊ ပြီး တစ်ပတ် နှစ်ခါ စသဖြင့် ပိုပိုစားမိမှပဲ ပိုဝလာနိုင်တာမို့ မလိုအပ်ပဲ စိတ်သောကရောက်စရာ မလိုပါ။ တစ်ပတ်မှာ ခြောက်ရက်လောက် Healthy food လေးတွေစားပြီး တစ်ရက်လောက်တော့ အထိန်းအကွပ်လေးနဲ့ တမုန်းစွဲနိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း ၂ပတ်လောက်လုပ်ပြီး အဆီဘယ်လောက် ကျနိုင်မလဲ၊ သိသာသွားနိုင်မလား မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်နေသူများအတွက်လဲ တူတူပါပဲ။ ချက်ချင်းကြီး ဝမလာနိုင်သလို ချက်ချင်းကြီးလဲ ပိန်မလာနိုင်ပါ။ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Lifestyles မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ့အလုပ် သူလုပ်ဖို့၊ ချိန်ညှိဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။
သင်လဲ သင့်အလုပ်၊ သင့်လေ့ကျင့်ခန်း သင်လုပ်။ အချိန်တန်ရင် ပိန်သွားပါလိမ့်မယ်။
၈။ ခေါက်ဆွဲပြုတ် စားလို့ရလား၊ ထမင်းသုတ် စားလို့ကော ရလား၊ ပိန်သွားအောင် ဘာတွေ စားရမလဲ ?
ပိန်သွားဖို့ရော၊ ကြီးထွားသွားဖို့ရော ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လို အစားအစာကို ဘယ်လိုခွက်နဲ့ ထည့်စားပါလို့ လိုက်အကြံပေးနေလို့က မလွယ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဘာအစာ စားရမလဲ ဇဝေဇဝါ လူတွေအတွက် Diet အကြောင်း နားလည်လွယ်အောင် ဥပမာပေးလိုက်ပါမယ်။
တစ်နေ့ကို ၂၀၀၀ ဖိုး စားလို့ရမယ်ဆိုပါစို့။
ဒါနဲ့ ပိုက်ဆံ ၂ထောင်နဲ့ စားဖို့် သောက်ဖို့ စားသောက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါ စားသောက်ဆိုင်မှာ အပေါ်ယံ 2မျိုးခွဲထားတဲ့ Menu တွေ့ပြီ။
-ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီအောင် ချက်ထားတဲ့ အစာ၊ ဒါမှမဟုတ် အာဟာရ မပြည့်ဝတဲ့ အစာ
အာလူးကြော် (300 kyats)
ကြက်ကြော် (500 kyats)
ထမင်းသုတ်၊ ခေါက်ဆွဲသုတ် (300 kyats)
ကိတ်၊ Pizza (800 kyats)
Ice cream (600 kyats)
အချိုရည် (200 kyats)
- ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင် ချက်ထားတဲ့ အစာ၊ ဒါမှမဟုတ် အာဟာရ ပြည့်ဝတဲ့အစာ
အသီးအနှံ (50 kyats)
အသားကင် (ဆီနဲနဲ) (200 kyats)
Hotpot အသားအရွက်စုံ (300 kyats)
ကြက်ဥပြုတ်၊ ကြော် (50 kyats)
Oak (100 kyats)
ဒိန်ချဉ် (50 kyats)
နွားနို့ (50 kyats)
အာလူးကင်၊ ဖုတ် (50 kyats)
စသဖြင့် ရှိမယ် ဆိုပါစို့။ (ဥပမာပေးတာပါ)
ပိုက်ဆံ ၂၀၀၀ နဲ့ အပေါ်က ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ် အာဟာရနည်းတာတွေ စားမယ်ဆို ၂မျိုး ၃မျိုးလောက်ပဲ စားနိုင် တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကြက်ကြော်တစ်ခု 500၊ အာလူးကြော် 300၊ ကိတ်တစ်တုံး 800၊ အချိုရည်တစ်ခွက် 200 လောက်ဆိုရင်တောင် 2000 နည်းပါးဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီလောက်နဲ့တော့ တစ်နေ့လုံး မဝပေမယ့် သင့် 2000 ကကုန်သွားပါပြီ။
ဒီလို မဟုတ်ပဲ အောက်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတဲ့၊ အာဟာရပြည့်တဲ့ Menu ကနေမှာစားမယ် ဆိုပါစို့။
အာလူးချင်းတူပေမယ့် အာလူးမီးဖုတ်က 50 ထဲဆိုတော့ 6ခု စားမှ 300 ထဲရယ်။ ကြက်သားချင်းတူပေမယ့် ကြက်ကင် ဆီနဲနဲက 200 ထဲရယ်။ အချိုရည် မသောက်ပဲ နွားနို့သောက်မှ 50ထဲ။ 2000 ဖိုးဆို ကုန်တောင် ကုန်မှာ မဟုတ်။ ဗိုက်လဲဝ၊ အာဟာရလဲ ပြည့်တယ်ဟုတ်။
အပေါ်ကပြောထားတဲ့ ဈေးတွေကို Calorie လို့မှတ်လိုက်ရင် 2000 Calorie စားလို့ မပိန်မဝဘူး ဆိုပါစို့ ။ (ဈေးတွေက ဥပမာတွေနော်၊ တကယ်ထင်ပြီး တွက်ပြီး ကြက်ကင် အခု ၂၀လောက်စားမနေနဲ့ 😂😂😂)
ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီတဲ့ အစားအစာတွေကို စားရင် 2000 ကျပ် (Calorie) ပြည့်ဖို့လွယ်လွန်းပြီး၊ ကျော်ထွက်သွားရင်တော့ ဝလာပြီသာမှတ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတာတွေစားရင်တော့ 2000 ကျပ် (Calorie)တောင် ကုန်မှာမဟုတ်။ ဗိုက်လဲ ပြည့်သလို 2000 မပြည့်လို့ အဆီလဲကျတယ် မဟုတ်လား။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီမညီဆိုတာ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ ?
အာလူးချင်းတူပေမယ့် ဆီကြော်နဲ့၊ မီးကင်နဲ့ မတူပါဘူး။ ဘယ်အရာမဆို ဆီနဲ့ကြော်လိုက်ရင် Calorie အဆမတန်တက်သွားပါတယ်။ ဒီသဘော အတိုင်းပါပဲ၊ ထမင်းဖြူက Calorie နဲပေမယ့် ထမင်းကြော်က Calorie များ (ဈေးကြီး)သွားတာမို့ အဆီကျလိုသူတွေ ရှောင်ရမှာပါ။
ထမင်းသုတ်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ခေါက်ဆွဲသုတ် စတာတွေကလဲ တူတူပါပဲ။ အာဟာရ မများသလို Calorie လဲများတာမို့ အာဟာရမရှိပဲ ဗိုက်သာပူလာတတ်ပါတယ်။ (ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အသားပြုတ်တွေ ထည့်သုတ်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတာကတော့ ဘာဆိုဘာမှ သိပ်မပါတဲ့ အလွတ်တွေများတယ် မဟုတ်လား)
ဒီလောက်ဆိုရင် အဆီကျချင်ရင် ဘာတွေစားရမလဲ ဆိုတာကို အသေးစိတ်လိုက်မေးစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်။ အစာတစ်မျိုးထဲက ကောင်းသလို၊ အဲအစာကပဲ မကောင်းပြန်ဘူး ဖြစ်နိုင်တာမို့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲဆိုတာကို ကြည့်ပါ။
စားသင့်တဲ့ ပမာဏကတော့ ပိန်ချင်သူများ ၂ပတ်မှာ ၃ပေါင်လောက်ကျအောင် လျှော့စားပါ။ ၂ ပတ်နေလို့မှ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရက်သားနဲ့ မပိန်ဘူးဆိုလျှင် ချက်တာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီမညီ ပြန်စစ်။ မညီရင် ညီတဲ့ဟာတွေ ပြောင်းစား။ ညီရက်သားနဲ့ မကျသေးရင်တော့ ပမာဏလျှော့စားပါ။
ထွားချင်သူများကတော့ ၂ပတ်မှာ ၂ပေါင်လောက် တက်အောင်စားပါ။ ၂ပတ်နေလို့မှ မတက်သေးရင် ပိုစားပါ။
အခုမေးခွန်းလေးတွေဟာ ပေါ့ပေါ့လေး မေးတတ်ကျပေမယ့် အရေးပါတဲ့ သဘောတရားတွေ ပါပါတယ်။ ဒီလို ကွင်းဆက်လေးတွေပြတ်နေရင် အဆီမကျ အသားမတက် ဆိုတဲ့ ဝင်္ကပါထဲမှာ ဝဲတလည်လည် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေက အတိုအထွာလေးတွေ ဆိုပေမယ့် လူမေးအများဆုံး၊ အမှားတတ်ကြဆုံး ဗဟုသုတတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းစာမျက်နှာ - Golden_Dreams 😊❤️
Posted by Alex Aung at 9:30 AM No comments:
ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းစိတ်ပညာ (Relationship Conflict Resolution)
ချစ်သူ/ရည်းစား/အိမ်ထောင်ဖက် ဆက်ဆံရေး (romantic relationship) တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီးသွားရင် ဘယ်လိုတည်မြဲအောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမေးများပါတယ်။ အကြံပြုထားကြတဲ့စာပေတွေလည်း မနည်းမနောရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ ကိုယ်မှတ်သားနာယူဖူးတာလေးတွေ၊ စာထဲမှာဖတ်ဖူးတာလေးတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းပြီး relationship တစ်ခုမှာ ပဋိပက္ခ (conflicts) လေးတွေရှိလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို အဓိကထား ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပဋိပက္ခဆိုတာ စကားများရန်ဖြစ်တာ၊ ကွဲကြပြဲကြတာကိုပဲ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာ နှစ်ဦးကြားမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဘောထားချင်း၊ အမြင်ချင်း၊ အထင်ချင်း၊ ယုံကြည်ချက်ချင်း၊ ရပ်တည်ချက်ချင်း၊ တစ်စုံတစ်ခုကို နားလည်ယူဆပုံ ဘာသာပြန်ပုံချင်း တသားတည်းကျမနေဘဲ တိုက်ဆိုင်ညီညွတ်မှုမရှိတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပဋိပက္ခတစ်ခုအပေါ် လူတွေဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကတချို့ကတော့ ပါးစပ်နဲ့နာအောင်ပြောတာ၊ မိမိအသာစီးရရေး ကိုယ်မှန်ရေးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ငြင်းခုံတာ၊ တစ်ဖက်သားမှားကြောင်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ သက်သေပြဖို့ကြိုးစားတာ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာ၊ ဒီလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်တာ၊ တစ်ဖက်သားနဲ့မဆိုင်တဲ့ ဘေးလူတွေ တခြားအချင်းအရာတွေကိုပါ ဆွဲသွင်းတာ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစု သိပ်သတိမထားမိကြတဲ့ ပဋိပက္ခတစ်မျိုးကတော့ တစ်ဖက်သားကို ဘာမှမပြောတော့ဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်တာ၊ လျစ်လျူရှုလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေကြောင်း၊ ဘယ်လိုခံစားနေရကြောင်းကို တစ်ဖက်ကို အသိမပေးဘဲ ပြောမပြဘဲ ကြားထဲမှာစိတ်နံရံတစ်ခုခြားပစ်လိုက်တတ်တာပါ။
ပဋိပက္ခစတင်ရာအခြေခံရာ အကြောင်းရင်းဇစ်မြစ်ကို အတူတူရှာဖို့ (သို့မဟုတ်) ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရှာဖို့တောင် မကြိုးစားဘဲ ပြဿနာဟာ သူ့ဟာသူအလိုအလျောက် ချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်လို့ယူဆပြီး အချိန်တစ်ခုကြာ ပြဿနာကနေ ရှောင်နေလိုက်တာမျိုးဟာ ထိရောက်တဲ့ပဋိပက္ခဖြေရှင်းနည်း (conflict resolution) မဟုတ်ပါဘူး။ ပဋိပက္ခကို ပိုဆိုးရွားသွားစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း တစ်ဖက်လူက ပြန်လာမခေါ်မချင်း၊ ဒါမှမဟုတ် လာမတောင်းပန်မချင်း၊ လာမညှိမချင်း ပေခံပြီးတော့ကို စိတ်အကြေကွဲခံ၊ ဒေါသအဖြစ်ခံ၊ ရင်အနာခံပြီး ပြဿနာကို မဖြေရှင်းပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါ အချိန်တစ်ခုကြာလို့ နှစ်ဦးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားသည့်တိုင်အောင် အဲ့ဒီပဋိပက္ခ/ပြဿနာဖြစ်ပွားရာ မူလဇစ်မြစ်အကြောင်းအရာဟာ ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ္တငုပ်လျိုးနေတာမျိုးပဲ ဖြစ်မှာပါ။ နောင်အခါ ပြန်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါကျမှ မီးတောင်ပေါက်ကွဲသလို အားလုံးဟာ အဆင့်ဆင့်အထပ်ထပ်ဖြတ်ပြီး ဟိုးအောက်ခြေကငုပ်လျိုးနေတဲ့အရာတွေပါ အပေါ်ကို အကုန်ဆန်ကြွပြီး ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ အပျက်အစီးလည်း ပိုများနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြဿနာ/ပဋိပက္ခကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို အကြံပေးချင်ပါတယ်။
(၁) တစ်ဖက်လူကို စကားပြောဖို့ အခွင့်အရေးပေးပါ
ပဋိပက္ခတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာက ကိုယ့်ဘက်က ပြောပြချင်တဲ့အချက်အလက်တွေ၊ ကိုယ့်ထင်မြင်မှုတွေ၊ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်တွေကိုချည်းပဲ ရှေ့တန်းတင်လေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေကြောင်းကိုအရင်းခံပြီး ဖော်ပြချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တာပါ။ ကိုယ်မှန်နေပါလျက်နဲ့ တစ်ဖက်က ဘာကြောင့် နားမလည်နိုင်ရသလဲ၊ အမှန်ကိုမမြင်နိုင်ရသလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဒါကိုပဲ သဘောမပေါက်မချင်း၊ မမြင်မချင်း ထပ်ခါထပ်ခါ စကားရည်လုပြီးပြောမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် တကယ့်ပဋိပက္ခဇစ်မြစ်ကိုရှာဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ရာဟာလည်း နှောင့်နှေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နှစ်ဦးစလုံးက တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ကိုယ်ထင်မြင်ရာ ယုံကြည်ရာတွေကိုပဲ ကိုယ့်ဘက်ကအမှန်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ ခွန်းတုံ့ပြန်ပြောနေကြမယ်ဆိုရင် ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘဲ ပြဿနာပိုရှုပ်ထွေးလာတာပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ကိုယ်ပြောချင်တာပြော၊ ကိုယ်ဖော်ပြချင်တာကိုလည်းဖော်ပြရမှာဖြစ်သလို တစ်ဖက်သားရဲ့ ခံစားချက်၊ သဘောထား၊ အမြင်၊ ယုံကြည်ချက်တွေကိုလည်း နားထောင်ဖို့ အချိန်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုအချိန်ပေးဖို့ရာ သူပြောတာကို သေသေချာချာ နားထောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကအများကြီးပြောပြချင်နေတာမှန်ပေမဲ့ ခဏလေးစောင့်ပြီး သူပြောတာကိုလည်း နားထောင်ပေးပါ။ လုမပြောပါနဲ့။ သူပြောချင်တာပေးပြောလိုက်ပါ။ သူပြောလို့ဝပြီဆိုမှ ဒါကတော့ဒီလိုဟုတ်ပြီ၊ မင်းဘက်ကသဘောထားကို ငါနားထောင်ပြီးပြီ၊ ငါနားလည်တယ်၊ အခု ငါ့ဘက်ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ကျေးဇူးပြုပြီးနားထောင်ပေးပါလို့ စကားခံပြီး ကိုယ်ပြောချင်တာကို စကားလုံးသေချာရွေးချယ်ပြီးပြောပါ။ ဒီလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားထောင်ကြတဲ့အဆင့်ဟာ conflict resoluation မှာ ပထမဦးဆုံးနဲ့ အခြေခံအကျဆုံးအချက်ပါ။
(၂) စကားပြောတဲ့အခါ မင်းကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ရှောင်ပါ
နံပါတ်(၁)မှာပြောခဲ့သလို ကိုယ့်ဘက်ကဖြေရှင်းချက်ထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရလို့ တကယ်ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကိုပြောပြီဆိုရင်လည်း မင်းကြောင့်၊ မင်းလုပ်လိုက်လို့၊ မင်းမလုပ်မိလိုက်လို့ စတဲ့ စွပ်စွဲချက်ဆန်တဲ့၊ အပြစ်တင်သလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးသက်ရောက်တဲ့စကားလုံးတွေကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒီလိုစကားလုံးတွေကို သုံးနှုန်းခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ဘက်ကအမြင်ကို အေးအေးဆေးဆေးပြောပြနေတာနဲ့မတူဘဲ တစ်ဖက်သားကို ဖိနှိမ်ပြီးအပြစ်တင်နေတာမျိုး သဘောသက်ရောက်သွားနိုင်လို့ပါ။ အဲ့လိုသဘောသက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ဖက်က ကိုယ်ပြောတာကို ဆုံးအောင်နားထောင်ချင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပြီးဝင်ပြောတော့မှာပါ။ ဒီအခါ ပဋိပက္ခဟာ သံသရာလည်ပြီး မကြာသင့်ဘဲ ပိုကြာရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။
(၃) အချိန်ယူဖို့လိုအပ်ရင် ယူပါ
ပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ချင်း နှစ်ဖက်စလုံးက သွေးပူနေတာမို့ ဘာပဲပြောပြော/လုပ်လုပ် အမှားပါနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်တဲ့အလားအလာလည်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို တစ်ခုခုကို ပြောမိလုပ်မိမှာကို ကိုယ့်ဘက်က ကြိုတင်တွက်ဆမိရင် (သို့မဟုတ်) ကျိန်းသေကြိုမြင်နေရင် အချိန်တစ်ခုယူပါ။ ချက်ချင်းမဖြေရှင်းပါနဲ့။ တချို့က ကိုယ့်ဒေါသအခြေအနေ၊ ကိုယ့်နှုတ်အမူအယာ ကိုယ်အမူအယာအခြေအနေ အသွားအလာကို ကိုယ်တိုင်နားလည်ထားကြပါတယ်။ အဲ့လိုနားလည်တဲ့အလျောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချင့်ချိန်ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်နေတုန်းမှာ ဘာမှ အလျင်စလိုမလုပ်မိနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
အချိန်တစ်ခုယူပြီး သွေးအေးအောင်ခဏနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆရင် အချိန်တစ်ခုယူလိုက်ပါ။ "ငါ ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပါ့မယ်၊ ဒါပေမဲ့ ငါ့ကိုအချိန်ခဏလောက်ပေးပါ" လို့ ရိုးရိုးလေးပဲခွင့်ပန် request လုပ်ပြီး ပြဿနာနဲ့ဝေးရာ၊ သွေးအေးရာကို ခဏရှောင်ထွက်သွားလိုက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က အဲ့လို ပြဿနာနဲ့ နည်းနည်းဝေးကွာတဲ့နေရာမျိုးမှာ သွေးအေးအေးနဲ့အချိန်ခဏလောက်ယူပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တစ်ယောက်တည်းတွေးပြီး အဖြေရှာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့တော့ မတူကြပါဘူး။ အဲ့လို အချိန် (time) နဲ့ နေရာ (space) ခဏလောက်ယူပြီး ကိုယ့်စိတ်အခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့ဟာ သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာထင်နေမြင်နေ ယုံကြည်နေတာတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချိန်နဲ့နေရာခဏလောက်ပေးပြီးလို့ ပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ရလာတဲ့ရလာဒ်မျိုးဟာ များသောအားဖြင့် မတူညီတာကို တွေ့ရပါမယ်။
နေရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်း physical space (ခန္ဓာကိုယ် နေရာ) နဲ့ emotional space (ခံစားချက် နေရာ) ဆိုပြီး ထပ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ တချို့လူတွေမှာရှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်နားမှာ ခန္ဓာကိုယ်ချင်း နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေရင် စိတ်မလုံခြုံမှု၊ သံသယဖြစ်မှုတွေ ပိုများလာပြီး တကယ့်ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ဆီအာရုံမရောက်နိုင်ဘဲ ဒီအကွာအဝေး၊ နေရာကြီးကိုပဲစိုးရိမ်ပြီး ဒီလိုနီးကပ်နေတာကပဲ သူတို့အတွက် ပြဿနာနောက်တစ်ခု ထပ်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ မိမိကိုယ်ကိုမလုံခြုံမှု၊ အားငယ်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိုးရိမ်မှု၊ ဒေါသထွက်မှုတွေ ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း emotional space (ခံစားချက် နေရာ) အကွာအဝေးလေးတစ်ခု လိုအပ်တတ်ကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ချင်းက အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ (သို့မဟုတ်) တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူတူရှိနေကြပေမဲ့လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်ဆိုင်ရာ အကွာအဝေးလေးတစ်ခု တောင့်တတတ်ပါတယ်။ ဘာမှမပြောဘဲခဏ emotional space ပေးလိုက်ချင်းအားဖြင့် နှစ်ဦးစလုံး တစ်ယောက်စီ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ခံစားနေကြရတာတွေကို မိမိဘာသာမိမိ ပြန်သုံးသပ်ပြီး reflect လုပ်နိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် conflict resolution လုပ်ဖို့ရာ အဆင့်တစ်ဆင့် ပိုနီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ပဋိပက္ခကို လူချင်းတွေ့ပြီး မျက်နှာစုံညီဖြေရှင်းပါ
Conflict တစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ ဘယ်တော့မှ ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ၊ စာပို့/စာရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စေ မဖြေရှင်းပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် လူချင်းအပြင်မှာဆုံပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောပြီး လူကြီးဆန်ဆန် ဖြေရှင်းပါ။ အနေဝေးနေကြတယ်ဆိုရင် ဗီဒီယိုကော(လ်)လိုမျိုးနဲ့ စကားပြောနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒါမှသာ တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံး၊ အသံ၊ မျက်နှာအမူအယာ၊ လက်ဟန်ခြေဟန်အမူအယာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အမူအယာတွေကို နောက်တစ်ယောက်က သေချာဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အမူအယာကပြောတဲ့ဘာသာစကား (body language) ဟာ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရာမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု အများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဒါတွေကို မမြင်ရ မသိရတဲ့အခါ မလိုလားအပ်တဲ့ နားလည်မှုလွဲတာတွေ၊ အထင်အမြင်လွဲမှားတာတွေ၊ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုလွဲတာတွေ ပိုဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်နှာစုံညီသေချာဖြေရှင်းကြတာက ပြဿနာကိုကျေအေးစေဖို့ ပိုလွယ်ကူပါတယ်။
(၅) ဘာကြောင့် အချိန်နဲ့နေရာ ယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ပြန်ဆုံတဲ့အခါ ပြောပြပါ
နံပါတ်(၃)မှာပြောခဲ့သလို time and space ယူပြီးသွားလို့ နှစ်ဦးသား ပြန်လည် မျက်နှာဆုံညီပြန်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင် ကိုယ် ဘာကြောင့် အဲ့လိုမျိုး အချိန်နဲ့အကွာအဝေးလေး ခဏလောက်ယူခဲ့ရသလဲဆိုတာကို သေချာပြန်ရှင်းပြပါ။ အဲ့လိုအချိန်ယူနေစဉ်၊ အကွာအဝေး (space) လေး ခဏယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်က ဘာတွေတွေးဖြစ်တယ်၊ ဘာတွေကိုတော့ဖြင့် မြင်သွားတယ်၊ အရင်က မတွေးမိတဲ့ဘယ်လိုအချက်တွေကိုတော့ဖြင့် တွေးမိသွားတယ်၊ ရှင်းလင်းသွားတယ် စသဖြင့် debriefing (ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို စနစ်တကျ ပြန်လည်တင်ပြတာမျိုး) လုပ်ပါ။ ဒါမှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုပိုခိုင်မြဲလာပြီး reunion (ပြန်လည်သင့်မြတ်မှု) ဟာလည်း ပိုအနှစ်သာရပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့လျှောက်ရမယ့်ခရီးလမ်းမှာလည်း ပြဿနာတွေထပ်ကြုံလာတဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လို time and space မျိုးပေးရမလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နိုင်မှာမို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့လည်းရသွားပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုအရေးကြီးတာက time and space မယူခင်မှာ ယူတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တစ်ဖက်သားကို အတိအလင်း အရိုးသားဆုံး အသိပေးသွားပါ။ အဲ့လိုအသိမပေးဘဲ ကိုယ့်ဘက်က တိတ်တိတ်လေးထွက်သွားမယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်က ကိုယ့်အပေါ် မယုံတာတွေ၊ သံသယရှိတာတွေပိုများလာနိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုလည်း ပြဿနာဖြစ်တိုင်း ရှောင်ထွက်ပြေးသွားသူ၊ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှု (confrontation) ကိုကြောက်ရွံ့သူ၊ အားထားဖို့မသင့်သူ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူရယ်လို့ မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှမပြောဘဲထွက်သွားမယ်ဆိုရင် အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး သက်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ သူ့ခံစားချက်ကို ကိုယ်က ဘာမှနားထောင်ဖို့မကြိုးစားဘဲ သူနဲ့ဝေးရာကို ရှောင်ထွက်သွားတယ်၊ လျစ်လျူရှုသွားတယ်၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သွားတယ် စတဲ့သဘောမျိုးတွေ သက်ရောက်နိုင်တာမို့ time and space ယူဖို့လိုအပ်ပြီဆိုရင် လိုအပ်ကြောင်း၊ ယူတော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းကို သေသေချာချာ သူသိအောင်ပြောပြပြီးမှ ယူပါ။
(၆) ကြားခံလူတစ်ယောက်ယောက် ရှိဖို့လိုအပ်ရင် အကူအညီတောင်းပါ
တခါတလေမှာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် စကားပြောဖို့၊ ရှင်းပြဖို့ နှစ်ယောက်တည်းအဆင်မပြေဘူး၊ မလုံခြုံနိုင်ဘူးလို့ခံစားရရင် ကြားခံလူ (တတိယလူ)/mediator တစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး ညှိနှိုင်းကြပါ။ အဲ့ဒီလူကလည်း ဘက်လိုက်တဲ့လူမျိုးမဖြစ်စေရဘဲ နှစ်ဦးစလုံးက ယုံကြည်စိတ်ချရသူ၊ အားမနာတမ်း မျက်နှာမပူစတမ်း အကုန်ဖွင့်ချတိုင်ပင်နိုင်မယ့်လူမျိုးဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ဦးဦးရဲ့ မိသားစုဝင်ဆိုရင် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးက အရမ်းယုံကြည်အားထားရတဲ့ အကုန်တိုင်ပင်လို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် relationship အကြံပေးလိုမျိုးဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ သူ့ကိုပြောမထွက်တဲ့စကားလုံးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာလည်း ကိုယ့်မျက်နှာကိုတည့်တည့်ကြည့်ပြီး ပြောမပြနိုင်ရက်တဲ့ ခါးသီးတဲ့အမှန်တရားတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ ကြားထဲမှာလူတစ်ယောက်ယောက်ရှိနေခြင်းအားဖြင့် ကြားလူကိုအကြောင်းပြုပြီး မပြောချင်တဲ့အရာတွေ၊ မပြောရက်တဲ့အရာတွေကို ပိုပြီးပြောထွက်လာဖို့ ရဲသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီကြားခံလူကိုလည်း လိုအပ်မှသာ နှစ်ဦးကြားမှာ ဝင်ရောက်ဖြန်ဖြေပေးဖို့၊ ဘာမှဝေဖန်အကဲဖြတ်မှုမျိုး ကြားဖြတ်ပြောဆိုမှုမျိုးမလုပ်ဖို့ ကြိုတင်သတိပေးထားသင့်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသားညှိနှိုင်းနေတာ၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကို ကြားခံလူတစ်ဦးအနေနဲ့ သက်သေခံရှိနေပေးတဲ့သဘောမျိုးဆောင်အောင်ပဲ ထားရှိသင့်ပါတယ်။
(၇) ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားတဲ့အခါ ပဋိပက္ခကို ပြန်သုံးသပ်ပါ
နှစ်ဦးသားပြန်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာ/ပဋိပက္ခအကြောင်းကို ပြန်ပြောပါ။ ရှက်မနေပါနဲ့။ အားနာမနေပါနဲ့။ ဒီပြဿနာအပေါ် ထပ်နားလည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒီပဋိပက္ခဖြစ်လိုက်တုန်းက ငါတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့ကြတယ်၊ ဘယ်အရာတွေကတော့ မှားပြီး ဘယ်အချက်တွေကတော့ ဖြစ်သင့်ခဲ့တယ် လုပ်ခဲ့သင့်တယ်၊ ဘာတွေကိုတော့ဖြင့် မလုပ်သင့်မပြောသင့်ခဲ့ဘူး၊ အချိန်ဘယ်လောက်ယူလိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်၊ နေရာဘယ်လောက်ယူလိုက်တာက အဆင်မပြေခဲ့ဘူး၊ ဘာကတော့ အဆင်မပြေတာမို့လို့ နောက်ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြမယ် စသဖြင့် နောင်အနာဂတ်မှာရှိလာဦးမယ့် ပဋိပက္ခတွေအတွက်လည်း ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီတော့ ထပ်ဖြစ်လာဦးမယ့် ပဋိပက္ခတွေမှာ ပိုအောင်မြင်၊ ပိုထိရောက်တဲ့ conflict resolution နည်းလမ်းတွေဆီချဉ်းကပ်ဖို့ရာအတွက် အလားအလာပိုရှိသွားပါတယ်။ ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း မှန်ကန်မြန်ဆန်တဲ့နည်းလမ်းကို နှစ်ဦးသား ပိုမိုသိမြင်နားလည်သွားနိုင်ပါတယ်။ ။
ရေးသားသူ - Craton Highways
Labels: Lifestyle, psychology, Relationship Advice
(မက်ဖော်မင်က 75% Alkaloid ပါ အပင်က ထွက်တဲ့ ဆေးပါ အများစုက ဆိုးကျိုးများတယ်ထင်နေကြသလို အနောက်တိုင်းဆေးဝါးပဲထင်နေကြသူများပါတယ် ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ပါပဲ ကိုယ်သုံးနေတာ plant based medicine မှန်းမသိကြပါဘူး အမှန်မြင်ကြပါစေ အငြင်းမပွားကြပါနဲ့ အစွန်းမရောက်ဖို့လိုတယ် ကိုယ့်ဆေးပညာသည်သာ အကောင်းဆုံး တခြားဆေးပညာတွေအသုံးမဝင်ဘူးလို့မမြင်ကြဖို့ပါ လူသားတွေ အကျိုးများရင် Herbal နေနေ Verbal နေနေ Functional Medicine နေနေ Homeopathic ဆေးပညာနေနေပါ အသုံးဝင်နေတာပါပဲ အရမ်း Orthodox မဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်)
Metformin ၏ “ သွေးချိုကျစေတဲ့ ကောင်းကျိုးအပြင်”
Metformin:Beyond Glycemic Control
မက်ဖော်မင်ကို နေ့စဉ်သောက်နေတာက ကျောက်ကပ်ပျက်စေတာ မဟုတ်ဘဲ သွေးချိုမထိန်းတာကသာ ကျောက်ကပ်ပျက်စေတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မက်ဖော်မင်က ကျောက်ကပ်ကို မပျက်အောင် ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆက်လက်ပြီး မက်ဖော်မင်ရဲ့ တခြားကောင်းကျိုးတွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်။
မက်ဖော်မင်ဟာ Galega officinalis ဂါလီဂါဆိုတဲ့ #အပင်မှရတဲ့ #တိုင်းရင်းဆေးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၇၇၂ လောက်က ဒီဆေးပင်ကို ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာတွေ သက်သာစေဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့ဖူးတယ်လို့ စာတွေထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၅၇ နှစ်ရောက်တော့မှသာ ဒီဆေးကို Jean Sterne ဆိုသူက ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက တုပ်ကွေးလူနာတွေအတွက် သုံးရာမှ ဒီလူနာတွေမှာ သွေးချိုတွေကျသွားတာ ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ဆက်လက်သုတေသနတွေပြုလုပ်ပြီး သွေးချိုကျဆေးအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလား၊ စိတ်ချရပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ မက်ဖော်မင်ဟာ တော်တော်လေး စိတ်ချလုံခြုံရတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်နေတာ သုံးတဲ့ကာလတွေ ကြာလေလေ ပိုပြီးသိလာကြပါတယ်။ ယခုတော့ သူဟာ အသုံးအများဆုံးသော ဆီးချိုဆေးဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့ကို ဆီးချိုကုထုံးရဲ့ ထိပ်ဆုံးက ပထမဦးဆုံး သုံးရမယ့် ဆေးအဖြစ် အားလုံးသဘောတူ လက်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် ၂၀၁၇ နှစ်ဟာ မက်ဖော်မင်ကို စသုံးတာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် မက်ဖော်မင်ဟာ ဆီးချိုအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးတစ်လက်အနေနဲ့ ကျော်ကြားရသလဲ ဆိုတော့ -
သွေးချိုကို ထိရောက်စွာ ကျစေခြင်း၊
တာတိုမှာရော တာရှည်မှာပါ ဆိုးကျိုးမရှိခြင်း၊
ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်း၊ စတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဖော်မင်ကို သောက်တာကြောင့် သွေးချိုကျစေတာအပြင် တခြားကောင်းကျိုးတွေလည်း အများကြီး ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
ဆီးချိုရောဂါ မဖြစ်မီ မက်ဖော်မင်သောက်ခြင်းဖြင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ အဓိက ဇစ်မြစ်ဟာ Insulin Resistance လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဆူလင်ကို တွန်းခံနေတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက် အင်ဆူလင် ထုပ်လုပ်မှုအား မြန်မြန်ကုန်စေပြီး ဆီးချိုသွေးချိုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးက အဝလွန်သူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အဝလွန်သူတွေဟာ အများအားဖြင့် ဆီးချိုဖြစ်လုဆဲဆဲ Impaired Glucose Tolerance (IGT) လို့ခေါ်တဲ့ အဆင့်မှာ ရှိနေကြပါတယ်။
သမရိုးကျစစ်တဲ့နည်းနဲ့ စစ်ရင်တော့ ဆီးချိုရောဂါ မဖြစ်သေးဘူးလို့ သတ်မှတ်သူတွေကို သေသေချာချာ Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) နည်းနဲ့ စစ်ကြည့်ရင် IGT လို့ ခေါ်တဲ့ ဆီးချိုဖြစ်လုဆဲဆဲ အဆင့်မှာ ရောက်ရှိနေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလို အဆင့်ရှိသူတွေက အများကြီးပါပဲ။ ဆီးချိုမိသားစုဝင်တွေမှာ ဝတဲ့ သူတိုင်း ရှိဖို့များပါတယ်။ ဒီလို ဆီးချိုဖြစ်လာမယ့်သူတွေကို အစောကြီးကတည်းက ဆီးချိုမဝင်အောင်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆီးချိုဝင်တာ နောက်ကျအောင် မက်ဖော်မင်က ကာကွယ် တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ စပြီး ပြုပြင်ရင် အထိရောက်ဆုံး၊ အသက်အရှည်ဆုံး ဖြစ်ပါမယ်။ IGT အဆင့်ကတည်းက ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းတာလည်း စလုပ်ရင် မက်ဖော်မင်ကို ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဖော်မင်က ဆီးချိုကို ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု အမေရီကန်နိုင်ငံက တွေ့ရှိထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံကဆိုလျှင် ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိတောင် ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ဒါ့အပြင် မက်ဖော်မင်က သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကို Hypoglycemia ခေါ် သွေးချိုအကျလွန်တဲ့ အန္တရာယ်မရှိလို့ ဆီးချိုရောဂါ မဖြစ်သေးသူတွေမှာ လုံခြုံစွာ သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မက်ဖော်မင်ကို မိမိသဘောနဲ့ သောက်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ပထမဦးဆုံး မိမိရဲ့ ဆီးချိုအဆင့်က နောက်နောင်မှာ ဖြစ်ကိန်းရှိတာလား (Pre IGT)၊ ဖြစ်လုဆဲဆဲ တာဆူနေတာလား (IGT) ဆိုတာ တတ်ကျွမ်းသူတွေထံ စစ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဝတဲ့ ဆီးချိုလူနာတွေအဖို့ မက်ဖော်မင်က ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းတွင်းအဆီနဲ့ အသည်းအဆီတွေလဲ ကျစေပါတယ်။ သွေးတွင်း အဆီတွေလဲ ကျစေပါတယ်။ သွေးဥမွှားတွေ ပူးကပ်ပြီး သွေးခဲလွယ်ခြင်းကိုလည်း တာဆီးပေးလို့ သွေးကြောမပိတ်အောင် ကာကွယ်မှုတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးကြောတွေရဲ့ အတွင်း နံရံမှာ အဆီကပ်ပြီး ကြာရင် သွေးကြောတွေ မာမသွားအောင်လည်း တားဆီးပေးပါတယ်။ သွေးတိုးလည်း ကျစေတယ်လို့ တချိုလေ့လာချက်တွေက ပြောပါတယ်။ ထပ်မံ အတည်ပြုဖို့တော့ လိုပါသေးတယ်။
UKPDS ဆိုတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ အမျိုအစား၂ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နာမည်ကြီး သုတေသနကြီးရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ တွေ့ရှိချက်က မက်ဖော်မင်ရဲ့ ကောင်းကြောင်းကို သက်သေထူခဲ့ပါတယ်။ ဝတဲ့ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုသွေးချို လူနာတွေကို မက်ဖော်မင်နဲ့ကုထားတဲ့ လူနာအုပ်စုက တခြားကုထုံးတွေဖြစ်တဲ့ ဆာဖွန်နိုင်ယူရီးယား နဲ့ သော်လည်းကောင်း၊ အင်ဆူလင်နဲ့သော်လည်းကောင်း ကုထားသူတွေနဲ့ စာရင် နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း (Myocardial Infarction) ဖြစ်တာ ပိုနည်းကြောင့် တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မက်ဖော်မင်ကို နှလုံးသွေးကြောရောဂါရှိဖို့ အလားအလာရှိသူတွေ အားလုံး သောက်ထားသင့်ပါတယ်။ မက်ဖော်မင်ဟာ ဆီးချိုကုထုံရဲ့ ပထမနေရာမှာ အမြဲရှိနေသင့်ပါတယ်။
မက်ဖော်မင်ဟာ ဝတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အသုံးကျတဲ့ ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချို Gestational DM (GDM) နဲ့ ရာသီမမှန်တဲ့ Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) ရောဂါတွေမှာလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ PCOS ကတော့ အဝလွန်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သားဥအိမ်အရည်အိတ်တည်ခြင်း၊ ရာသီမလာခြင်း/မမှန်ခြင်း၊ ကလေးမရနိုင်ခြင်း ပြဿနာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြဿနာရှိသူတွေကို မက်ဖော်မင်ပေးခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါတယ်။ ထိရောက်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလို PCOS လူနာတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရလာတဲ့အခါ GDM လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်ပွားတဲ့ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလူနာတွေ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာလည်း မက်ဖော်မင်ဆက်သောက်ပြီး သွေးချိုထိန်းကြည့်တဲ့အခါ ထိရောက်မှုရှိပြီး ကလေးအပေါ် သက်ရောက်မှု ဆိုးကျိုးတွေ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါကြောင့် မက်ဖော်မင်ဟာ သွေးချိုသိပ်မများတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချို ကုသရာမှာ စိတ်ချစွာ သုံးနိုင်တာ တွေ့လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ဆီးချိုဖြစ်လာရင် ရှေးယခင်ကလို လူတိုင်း အင်ဆူလင် ထိုးဖို့ မလိုပါဘူး။ အင်ဆူလင် တွန်းခံမှုများရင် မက်ဖော်မင်ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထူးမှာကြားလိုတာကတော့ ဘယ်ကုထုံးနဲ့ သင့်လျော်သလဲဆိုတာ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုကို အမြဲယူသင့်ပါတယ်။
မက်ဖော်မင်က နောက်ထပ်ဘာတွေ ကောင်းတာရှိသေးလဲ
မက်ဖော်မင်ဟာ အာရုံကြောတွေကို တိုက်ရိုက်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်တဲ့ သတ္တိကိုလည်း သုတေသီတွေက တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ Oxidative Stress ကြောင့် အာရုံကြော ကလာပ်စည်း (Nerve Cells) တွေ ပျက်စီးခြင်း(Degeneration) ဖြစ်သဖြင့် မှတ်ဥာဏ်နည်းခြင်း၊ အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ သူငယ်ပြန်ခြင်း စတာတွေ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အဖြစ်နည်းအောင် မက်ဖော်မင်က တာဆီးနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုကတော့ မက်ဖော်မင်ဟာ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကောင်းကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ တွေ့ရှိချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဖော်မင်ကို ကင်ဆာကုထုံးတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး သုံးရင် ပိုမိုထိရောက်စေတာတွေလည်း တွေ့လာပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တဲ့ ဆီးချိုလူနာတွေမှာ Tamoxifen ဟော်မုန်းဆိုင်ရာ ကုထုံးကို သုံရတဲ့အခါ မက်ဖော်မင်သောက်ထားတဲ့ သူတွေမှာ အကျိုးပိုရှိတာ၊ ပိုပြီး ထိရောက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါ ပိုပြီး ထင်ရှားလာပါတယ်။ မက်ဖော်မင်ဟာ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကို တာဆီးနိုင်မလားဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ဆက်ပြီး လေ့လာနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် မက်ဖော်မင်ဟာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေ အားလုံး (ဆေးဒဏ်မခံနိုင်သူတွေနဲ့ ကျောက်ကပ်အား အလွန်နည်းသူတွေက လွဲပြီး) သုံးသင့်တဲ့ ဆေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဆီးချိုဆေး အားလုံးနဲ့လည်း တွဲပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုလူနာတွေရဲ့ သက်တမ်းကို ပိုရှည်စေနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အခြေခံအချက်တွေ အားလုံးကို ပြုပြင်ပေးလို့ နှလုံးအတွက် မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်၊ ဦးနှောက်၊ အသည်းတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အမျိုသမီးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မီးယပ်မမှန်၊ ကလေးမရတဲ့ရောဂါတွေကိုလည်း ကောင်းစေတဲ့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုမှာလည်း အသုံးကျပါတယ်။ နောက်ဆုံတော့ ကင်ဆာရောဂါတွေမှာလည်း အကျိုးပေးနိုင်တာတွေကို ဆက်ပြီးလေ့လာဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဖော်မင်ဟာ ဆီးချိုလူနာသာမက ဆီးချိုမရှိတဲ့ သာမာန်လူတွေ အတွက်လည်း အကျိုးရှိနိုင်မယ့် သုံးလို့ရနိုင်မယ့် ဆေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ မက်ဖော်မင်ရဲ့ သတင်းကောင်းလေးတွေကို ဆက်လက်စောင့်မျှော် ကြည့်ကြပါစို့။
Credit: ပါမောက္ခ သန်းသန်းအေး၏ ဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။
Posted by Alex Aung at 2:45 AM No comments:
Labels: Health, တိုင်းရင်းဆေး, ဗဟုသုတ
Posted by Alex Aung at 3:04 AM No comments:
ချဉ်စပ်ကဏန်းဟင်း - ရတနာရှစ်မျိုး ကောက်ညှင်းပူတင်း - ငါးကင် - မအူပင်ထမင်းပေါင်း
တီလားဗီးယားငါး - ၁ ကောင်
ခရုဆီ - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
နံနံပင် - များများ
ဖက်ဖယ်ရွက် - အနည်းငယ်
ငရုတ်သီး - ၁၀ တောင့်ခန့်
၁။ ငါးကို သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပြီး ရေစင်အောင် စစ်ထားပါ။
၂။ ငါးကို ဓားဖြင့် မွှန်းထားပါ။
၃။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံပင်၊ ချင်း၊ ငရုတ်သီး၊ ပင်စိမ်းရွက်၊ ငရုတ်သီး၊ ဖက်ဖယ်ရွက်နှင့် ရှမ်းနံနံတို့ကို ကြိတ်ပြီး ခရုဆီ၊ ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နှင့် ဆီတို့ကို ထည့်ပြီး အနှစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
၄။ အနှစ်ရပြီဆိုလျှင် ငါးကို နယ်ပါ။ စပါးလင်ကို ထုခြေပြီး ငါးဗိုက်ထဲ ထည့်ပါ။
၅။ အရသာစိမ့်ဝင်သွားစေဖို့ ၁ နာရီခန့် နှပ်ထားပါ။
၆။ အရသာနပ်ပြီးသွားပြီဆိုလျှင် အပူချိန် 180˚C အပူပေးထားတဲ့ Oven ထဲ ထည့်ပြီး ကင်ပါ။
၇။ မီးသွေးအကင်ဖိုဖြင့် ကင်မည်ဆိုလျှင် ကင်နေစဉ် ငါးအသားများ မခြောက်သွား အောင် ဆီဖြင့် သုတ်ပေးပါ။
၈။ အနံ့မွှေးပြီး ငါးလည်းကျက်ပြီဆိုလျှင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဆော့စ်ဖြင့် တွဲပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
(EIGHT-TREASURES RICE PUDDING)
နှစ်သစ်မှာ ချမ်းသာခြင်းသုခအပြည့်ရစေဖို့ ရတနာရှစ်မျိုး ကောက် ညှင်းပူတင်းလေး လုပ်စားကြပါတယ်။ တရုတ်နှစ်ကူးအစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်ပေမယ့် နေ့ကြီးရက်ကြီးတွေမှာလည်း တည်ခင်းလေ့ရှိပါတယ်။
• ကောက်ညှင်းပေါင်း - ၁ ပန်းကန်
• ပဲယို - ၁ ပန်းကန်
• နှစ်သက်ရာအသီးခြောက် - ၈ မျိုး
၁။ ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးအောက်မှာ ဆီအနည်းငယ်လူးပေးပါ။ သစ်သီးခြောက်များကို ခင်းထားပါ။
၂။ သစ်သီးခြောက်များအပေါ်မှာ ကောက်ညှင်းပေါင်းတစ်ဝက် ခင်းပါ။
၃။ အလယ်မှာ ပဲယိုထည့်ပြီး ကျန်သစ်သီးခြောက်နှင့် ကောက်ညှင်းတို့ကို ထည့်ပါ။
၄။ ပေါင်းအိုးထဲ ရေထည့်ပြီး ကောက်ညှင်းပန်းကန်ကို ထည့်၍ မိနစ် ၃၀ ခန့် ပေါင်းပေး ပါ။
၅။ ပေါင်းအိုးထဲမှာ မတည်ခင်းခင်အချိန်အထိ ပူနွေးနေအောင် ထည့်ထားပါ။
၆။ တည်ခင်းမည့်အချိန်မှာ ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ် ပေါင်းထားတဲ့ ကောက်ညှင်းပန်းကန် ကို မှောက်ချပြီး အပေါ်မှလိုသလို အလှဆင်ကာ တည်ခင်းနိုင်ပါပြီ။
ဂ စပျစ်ခြောက်ဝါ/နီ၊ စွန်ပလွံသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ သလဲသီး၊ ရက်စ်ဘယ်ရီခြောက်၊ မက်မန်းခြောက် တို့ဖြင့် ကိတ်ပုံစံဖန်တီးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂ တည်ခင်းမည့်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး ချိန်ဆပြုလုပ်ပါ။
Spicy Sweet & Sour Crab ချဉ်စပ်ကဏန်းဟင်း
ကဏန်း - ၇၅၀ ဂရမ် ( သန့်ရှင်းထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ - ၃၅ ဂရမ် (နုပ်နုပ်စဉ်းထားပါ)
ချင်း - ၃၅ ဂရမ် (နုပ်နုပ်စဉ်းထားပါ)
ငရုတ်သီးစိမ်း (နီ+စိမ်း) - ၁၀ တောင့် (နုပ်နုပ်စဉ်းထားပါ)
ကြက်သွန်မြိတ် - ၂ ပင် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
နံနံပင် - ၂ ပင်
ကြက်ဥ - ၄ လုံး
ပြောင်းဖူးမှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း+ရေ စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း
ရေ - ၆၀၀ မီလီလီတာ
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် - စားပွဲဇွန်း ၈ ဇွန်း
ငရုတ်သီးဆော့စ် - စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း
ဗီနီကာ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
Kikomanပဲငံပြာရည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ငရုတ်ကောင်းအဖြူ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
1. ပထမဦးဆုံး ပန်းကန်လုံးကြီးထဲကို ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်၊ ငရုတ်သီးဆော့စ်၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဗီနီကာ၊ သကြား၊ အရသာမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ထည့်ပြီး မွှေထားပါ။
2. သန့်ရှင်းထားတဲ့ ကဏန်းကိုခြောက်သွားစေဖို့အတွက် တစ်ကောင်ချင်းစီကို kitchen paper ဖြင့် သုတ်ထားပါ။ ရေခြောက်သွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကြော်တဲ့အခါမှာ ရေကျန်ပါက ဆီပေါက်တက်ပါတယ်။
3. ကဏန်းကြော်ဖို့ ဒယ်အိုးထဲဆီထည့်ပါ။ ဆီပူလာရင် ကဏန်းထည့်ပြီး ကြော်ပါ။ ကဏန်းအရောင်ပြောင်းရင် ဆယ်ထားပါ။
4. ချက်မဲ့ဒယ်အိုးအကြီးထဲ ဆီထည့်ပြီး အပူပေးပါ။ ဆီပူလျှင် ကြက်သွန်နီနဲ့ချင်းထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။
5. ကြက်သွန်ပျော့လာရင်တော့ ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ပဲငါးပိထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
6. ပြီးလျှင် စပ်ထားတဲ့ဆော့စ်နဲ့ရေထည့်ပါ။ ဆော့စ်ပျစ်လာသည်အထိ ချက်ရပါမယ်။
7. ဆော့စ်ပျစ်လာရင် ကြော်ထားတဲ့ ကဏန်းထည့်ပြီး ချက်ပါ။
8. ဆော့စ်ပိုပြီးပျစ်ဖို့အတွက် ပြောင်းဖူးမှုန့်ကို ရေဖျော်ပြီး ထည့်ပါ။
9. ဆော့စ်ပျစ်ပျစ်ဆူနေတဲ့အချိန်မှာ ကြက်ဥခေါက်ပြီး ထည့်ပါ။ ကြက်ဥကျက်ခါနီးမှ မွှေပေးပါ။
10. ပြီးလျှင် ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး နံနံပင်နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်ဖြူးပါ။ ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ငရုတ်သီးစိမ်း ပါပါးလှီးပြီး ထည့်နိုင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ - ငါးမြှောင့် (နုပ်နုပ်စဉ်းထားပါ)
ကြက်သွန်နီဥအသေး - ၄ လုံး (နုပ်နုပ်စဉ်းထားပါ)
ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန် - ၂ ခွက်ခွဲ(ရေစင်အောင်ဆေးထားပါ)
ကောက်ညှင်းဆန် - ၁ ခွက်ခွဲ(ရေစင်အောင်ဆေးထားပါ)
မက်ဂီပဲငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
Maggi ခရုဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
ကိုက်လန် - ၃ ပင်(အပိုင်းငယ်လေးများဖြစ်အောင်ဖြတ်ထားပါ)
ပဲပြားအမာ - ၁ ပြား(အတုံးသေးကလေးများတုံးထားပါ)
မုန်လာဥနီ - ၁ လုံး(အတုံးသေးသေးများတုံးထားပါ)
ပုဇွန်ခြောက် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်
သစ်ဂျပိုးခေါက် - တစ်လက်မအရွယ်(တစ်ချောင်း) (အစိတ်ကလေးများဖြစ်အောင် ထုထောင်းထားပါ)
ပဲပိစပ်ဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၅ ဇွန်း
၁။ ပထမဦးဆုံး ဟင်းချက်ဒယ်အိုးကို မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး မီးဖွင့်ပါ။
၂။ ဒယ်အိုးထဲသို့ ဆီသုံးဇွန်းထည့်ပြီး ဆီပူလာလျှင် နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့ ကြက်သွန်နီများကို ဆီသတ်ပါ။
၃။ ဆီမွှေးလာလျှင် ဆန်၊ ကောက်ညှင်းဆန်၊ သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်၊ နာနတ်ပွင့်တို့ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။
၄။ ပြီးရင် MAGGI ပဲငံပြာရည် နှင့် MAGGI ခရုဆီ တစ်ဇွန်းစီထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
၅။ အဲဒီနောက် ဒယ်အိုးထဲမှ ၄င်းတို့အားလုံးကို ထမင်းပေါင်းအိုးထဲသို့ ပြောင်းထည့်ပြီး ရေ ၆၀၀ မီလီ ထည့်ကာ ကျက်သည်အထိချက်ထားပါ။
၆။ ထမင်းချက်ထားချိန်မှာ ဒယ်အိုးကို မီးဖိုပေါ်မှာတင်ပြီး ဆီ ၂ ဇွန်းထည့်ပါ။
၇။ ဆီပူလာသောအခါ အသင့်တုံးထားတဲ့ ပဲပြားတုံးကလေးများကို ထည့်ပြီး မီးပြင်းပြင်းနှင့် ကြော်ပါ။
၈။ ပဲပြားများ အဝါရောင်သမ်းပြီး ကျက်သွားတဲ့အခါ ဆယ်ပြီး ဇလုံတစ်ခုထဲမှာ ထည့်ထားပါ။
၉။ ဒယ်အိုးထဲသို့ ဆီ ၁ ဇွန်းထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူဆီသတ်ပါ။
၁၀။ အနံ့မွှေးလာလျှင် မုန့်လာဥထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
၁၁။ ထို့နောက် ကိုက်လန်များကိုပါထည့်ကြော်ပြီး မွှေပေးပါ။
၁၂။ ကြော်ပြီးသားပဲပြားများကို ဒယ်အိုးထဲသို့ထည့်ပြီး အားလုံးရောမွှေပါ။
၁၃။ အဲဒီနောက် အားလုံးကို ပန်းကန်ပြားထဲသို့ ထည့်ထားပါ။
၁၄။ ပေါင်းအိုးထဲမှ ထမင်းကျက်သောအခါ ကြော်ထားသည်များကို ထမင်းပေါင်းအိုးထဲထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။
၁၅။ ပြီးရင်တော့ အားလုံးကို စားမည့်ပန်းကန်ပြားထဲထည့်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီနော်။
Posted by Alex Aung at 3:31 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 2:44 AM No comments:
လူငယ်တစ်ယောက်လိုနုပျိုနေတဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ လျှိုဝှက်ချက်
Posted by Alex Aung at 6:05 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 4:52 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 5:57 AM No comments: